वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : लुटिएपछि:)
दशकपछि नेपाली फिल्म हेरियो, त्यो पनि हलमै गएर।
धेरै सकारात्मक समीक्षा पढीसकिएको र सुनिसकिएको थियो ‘लुट’ को। हेर्न जाने मेसो भने अस्तिमात्रै प-यो। चर्चा अनुसारकै बलियो रहेछ ‘लुट’। ‘लुट’बाट सवा दुई घण्टा लुटिएपछि यथार्थमै मनमा एउटा केहि सार्थक कृति हेरेको अनुभव उत्पन्न भयो र नेपाली फिल्म उद्योगमा अब एउटा नयाँ सकारात्मक दिशा पनि थपिएको भान भयो।
२०५८ सालतिर ‘तँ त साह्रै बिग्रिस् नि बद्री’ हो कि ‘दर्पण छायाँ’ हेरेपछि मैले नेपाली फिल्म हेरेको थिईन। मूलधारका भनिने फिल्मका प्रोमो र गीतका दृश्यलेनै विकर्षित पार्छन् ती फिल्मबाट। तैपनि ब्लगमा एउटा पोष्ट बनाउनका लागिनै भएपनि कुनै दिन कथित ‘मूलधार’को कुनै एउटा फिल्म हेरौंला भन्ने सोचाई चाहिँ लगातार मनमा रहेको थियो। यस बीचमा राम्रा भनेर चर्चा पाएका केहि फिल्महरु पनि हेर्ने अवसर जुरेको थिएन।
‘लूट’को सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष वा मूलधारका भनिने अरु नेपाली फिल्मसँगको तुलनामा यसको प्रमुख सशक्तता भनेकै यसको मौलिकता र दमदार अभिनय हो। कथा बलिउडको कुनै मसलादार फिल्मबाट नक्कल गरिएको छैन, काठमाण्डौंको यथार्थ परिवेशबाट टपक्क टिपिएको छ। चल्तीको ‘फर्मुला’को गन्ध कतै आऊँदैन। संवादमा पनि पूरै मौलिकता छ, काठमाण्डौं वा अरु कुनै शहरमा युवाहरुको समूहले सडक र भट्टीमा प्रयोग गर्ने शब्दहरु र शैलीलाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ तर त्यसले फिल्मलाई अश्लील बनाएजस्तो लाग्दैन, बरु स्वाभाविकता थपिएजस्तो लाग्छ। नाटकबाट आएका कलाकारहरु भएर होला, सबैको अभिनय बेजोड छ।
यसका कमजोरीहरु पनि खोज्न नसकिने होईन तर अहिले हामी राम्रा नेपाली फिल्म हेर्न भोकाएको बेला अलि-अलि काँचो भात पनि खीरभन्दा मिठो लाग्छ, होईन र?
एउटा कुरा के चाहिँ ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ भने नेपाली सिने उद्योगले बिस्तारै नयाँ बाटो पक्रने जमर्को गरेको छ। र ‘लूट’को टिमसंग नेपाली सिने उद्योगलाई ‘लुट्ने’गरी फिल्म बनाउने संभावना धेरै छ। अझ स्पष्ट भएर भन्नुपर्दा 'रेखा थापाको तिघ्रा र राजेश हमालको पाखुरा' मात्रै नेपाली फिल्मको प्रतीक होईन रहेछन्।
Posted by Basanta at 11:26 AM
prem ballabh pandey February 6, 2012 at 7:29 PM
तपाईँले प्रशंषा गरेपछि हेर्न जाउँ-जाउँ भयेकोछ.हुनत,मैले हलमा गयेर वा अन्य कहींपनि फिल्म हेर्न छाडीसक्याछु.
दीपक जडित February 6, 2012 at 9:23 PM
म पहुँचमा भए अवश्य हेर्नेथिएँ ।
नेपाली फिल्महरु पहिले पहिले निक्कै हेर्ने गर्थें म । मनपर्दैन थिए त्यो अर्कै कुरा । हेरिसकेर 'छि यस्तो पनि के फिल्म बनाइराख्या होला' भन्ने पनि हुन्थ्यो त्यो पनि अर्कै कुरा तर पनि हेर्थें नेपाली फिल्महरु ।
अहिले लूटको बारेमा अन्यत्र पनि र तपाईंको ब्लगमा पनि चर्चा पढेर मनमा यहि आउँदैछ कि, 'अहा! लूट हेर्न पाए.....!'
Aakar Anil February 7, 2012 at 9:49 AM
नेपाली सिने जगतमा नसोचेको तर सफल चलचित्र बन्यो ! लुटले त लुटिसक्यो अब हाइवे र गुडबाई काठमाडौँको पर्खाइमा बसिएकोछ !
Bed Nath Pulami February 7, 2012 at 8:22 PM
maile pani6barsha pa6i nepali film here tyo pani halmai gayer ... thikai laagyo ... yasko bazzar halla suner hern gayeko thiye tar nirash bhain ...
हिरा बहादुर भुजेल February 11, 2012 at 3:13 AM
लौन एती धेरै प्रन्संसा कमाउन सक्ने नेपाली चलचित्र "लुट" हेर्ने भाग्य फुरोस हाम्रो पनि !
सायद आब हाम्रा कथित निर्देसक निर्माता हरुले सहि निक्योल लेख्ने पत्रकार लाई फिल्म नचलेको मा दोष दिन बन्द गरि, फिल्म भनेको के हो बुजी नया फिल्म बनाउन सुरु गर्छन कि ?
journalist yadav February 14, 2012 at 8:49 PM
धरेपछि मैले नेपाली फिलिम पनि हेरेको हो । एकदम मौलिक लाग्यो